BQ Cervantes Touch Light အသစ်ကိုဆန်းစစ်ခြင်း eReaders အားလုံး
စပိန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော eReaders တွင်နောက်ဆုံးပေါ် BQ Cervantes Touch Light
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကစပိန်ကုမ္ပဏီ BQ က၎င်း၏နောက်ထပ်ပစ်လွှတ်ဖြစ်သောအရာကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် BQ Cervantes တို့ထိပါ စပိန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်ကဏ္ competitive တစ်ခု၏အထင်ရှားဆုံးသောပြိုင်ဘက်များထဲမှတစ်ခုကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည် eBooks.
၎င်း၏တင်ဆက်မှုအတွင်းစျေးကွက်သို့ရောင်းချမည့်နေ့သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းကိုအတည်မပြုရသေးသော်လည်းတရားဝင် BQ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ပြီး စျေးနှုန်းမှာ ၁၂၉.၉၀ ယူရိုရှိပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုချက်ချင်းပြုလုပ်သည်ကိုမသိရသေးပါ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၏ဒုတိယနှစ်ပတ်အတွင်း BQ Cervantes Touch Light အသစ်ကိုစတင်ရောင်းချမည့်နေ့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
EQ Reader သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်များဝယ်ယူသောအခါ၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များအပြင် BQ ထုတ်ကုန်သစ်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ထင်ရှားသည်။
BQ Cervantes Touch Light အသစ်၏အဓိကလက္ခဏာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အရွယ်: 165x115x11,5 မီလီမီတာ
ဖန်သားပြင်: ၎င်းတွင် ၆ လက်မအရွယ် HD resolution ဖြင့် ၇၅၈ × ၁၀၂၄ pixels၊ မီးခိုးရောင်အဆင့် ၁၆ ခုနှင့်ပြင်းထန်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်မှေးမှိန်သွားသည့် built-in အလင်းပါရှိသည်။
internal memoryအသုံးပြုသူလုံးဝရရှိနိုင်သော ၂ ဂစ်ဂါဘိုက်နှင့်အတူ: မှတ်ဉာဏ်၏ ၄ ဂစ်ဂါဘိုက်
Processor ကိုစာမျက်နှာတစ်စက္ကန့်ခန့်အတွင်းလှည့်ပတ်သွားစေသော FS507 i.MX 800 MHz
ဘက်ထရီLi-ion 1.500 mAh
ထောကျပံ့ကို formats: PDF၊ ePUB၊ JPEG၊ PNG
DRM နှင့်အတူဖိုင်များ: PDF၊ ePUB
ဆက်သွယ်မှု: micro-USB 2.0၊ Wi-Fi ™ 802.11b/ g၊ micro-SDHC / SD ကဒ်
သံသယမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကြီးစွာသောစက်ကိုရင်ဆိုင်နေရသည် ဒီခရစ်စမတ်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ် စာဖတ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့်ဤဆန်းသစ်သောပေါင်းစပ်ထားသောအလင်းနည်းပညာများပါ ၀ င်သည့်ကိရိယာများနည်းတူအချို့သံသယများလည်းပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအတော်လေးနည်းပညာအသစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်ဆိုတာသေချာပေါက်ရှည်လျားတဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုရရှိမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲဒီအမျိုးအစားကို ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးစုံလင်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့ဆင်တူတဲ့ကိရိယာကိုရှာတွေ့နိုင်တာပေါ့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်သည်စောင့်ဆိုင်းရန်နှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်ရန်ဖြစ်သည်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့သည် BQ Cervantes Touch Light အသစ်ကိုစတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ခုတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပြီးထိတွေ့နိုင်သည့်အထိကျွန်ုပ်တို့လက်ဖြင့်ကိုင်ထားစဉ်နိဂုံးချုပ်နိုင်သည်။
BQ Cervantes Touch Light အသစ်နှင့်အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များကဲ့သို့မြင့်မားစွာယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ကဏ္ in တစ်ခုတွင် BQ ၏တိုးတက်မှုများကိုသင်မည်သို့မှတ်သနည်း။ သုံးစွဲသူများ၏ရာခိုင်နှုန်းမှာသူတို့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်ခဲ့သည် BQ Cervantes အားပိတ်ဆို့ထားသည်.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Bq Cervantes Touch သည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » BQ » စပိန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော eReaders တွင်နောက်ဆုံးပေါ် BQ Cervantes Touch Light
Alberto J. အားပြန်ကြားချက်
သင့်တွင် micorSD ကဒ်ရှိပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဖတ်နေသည့်စာအုပ်၏အမည်ကိုမှန်ကန်စွာမပြပါ။ (၎င်းသည်အခြားဖြစ်သည်ဟုသင်ကဆိုသည်)၊ ၎င်းစာအုပ်ကိုနှိပ်ခြင်းကသင့်အားမှန်ကန်သောစာမျက်နှာနှင့်မှန်ကန်သောစာမျက်နှာသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သူ၏အဖြေမှာကောင်းသော်လည်းအချို့သောအခြေအနေများတွင်သူသည်တုံ့ပြန်မှုနှေးကွေးသော်လည်း Wi-Fi နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ထိတွေ့နိုင်သောအစိတ်အပိုင်းမှာကျွန်ုပ်အားအနည်းဆုံးကိုတွေ့မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းအနည်းငယ်ထိခိုက်လွယ်မှုကင်းမဲ့ပြီးသင့်အားမှန်ကန်စွာစစ်ဆေးနိုင်စေရန်အတွက်ကောင်းစွာနှေးနှေးကွေးစွာဖုန်းခေါ်ဆိုစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စာဖတ်ခြင်းအချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည် configuration သို့မဟုတ် web browsing ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်
စျေးကွက်ရှိ ereaders တော်တော်များများလိုစျေးကြီးပြီးဒီအီလက်ထရောနစ်စာဖတ်ကိရိယာများကိုအထူးပြုထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသည်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဈေးကြီးသောစျေးနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းမှုများနှင့်တိုင်ကြားချက်များစွာရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ စာတမ်းကိုသာမန်ဖတ်ရှုခြင်းပုံစံအဖြစ်ဖယ်ရှားပစ်မည့်နည်းပညာကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်းများကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်ဟုမည်သူပြောသနည်း။ အကယ်၍ ၎င်း TFT သို့မဟုတ် LCD ဖန်သားပြင်များ (အီလက်ထရောနစ်မင်နည်းပညာရှိသည့်သူများအတွက်အခြားထုတ်ကုန်များ၊ စျေးနှုန်းချိုသာသည်) ကိုသင်ထပ်ထည့်ပါကမျက်စိကျန်းမာရေးကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းအမျိုးအစားများသည်လက်ရှိတွင်စျေးကြီးပြီးအနိုင်ကျင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည် ကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီများ၏ကျယ်ပြန့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများကိုအာမခံမထားဘူး။
အရမ်းမကောင်းဘူး ကျွန်တော်ဒါကိုနှစ်ခါပြောင်းလိုက်ပြီ ကဒ်ပြားတွေကိုမဖတ်ရဘူး၊ ပြန်ပိတ်စရာမလိုဘဲသော့ခတ်ထားတယ်။ ဘေးအန္တရာယ်။
ကျွန်တော်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ် ငါ off ခလုတ်ကိုဖိထားပြီးဘာမျှမ, ဒါဤကဲ့သို့သောတစ်နာရီထက်ပိုကြာပါသည်။ မည်သူမဆို၎င်းကိုသော့ဖွင့်ရန်မည်သို့သိသနည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ပိတ်ပင်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သုံးနာရီလောက်သင်နှင့်အတူတူပင်လုံးလုံးလျားလျားလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ သင်၎င်းကိုပြင်နိုင်ခဲ့ပြီလား။ မင်္ဂလာပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ Patri ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ သုံးနာရီလောက်သော့ခတ်ထားပြီးဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ခလုတ်ကိုစက္ကန့် ၃၀ လောက်နှိပ်ထားပြီးဘာမှမလုပ်ဘူး။ မည်သူမဆိုငါဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသိသနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပြitနာကိုပိတ်ဆို့ထားကြောင်းသင်မြင်သောပြproblemနာမှမည်သို့လွတ်မြောက်နိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပါ။ Bq အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပြီးဖြစ်သော်လည်းပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးပါ။ ဤပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနေရာတွင်မှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
မျက်နှာပြင်၏အသေခံခြင်း၊ ပကတိမတည်ငြိမ်မှုနှင့်အာမခံချက်မရရှိပါ၊ ၁၀ ရက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်းများသို့မဟုတ်ဘာမှမရှိပါ။
fatal, ဆိုးဝါး။ တကယ်စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ ၎င်းသည်သော့ခတ်ထားပြီးမည်သည့်လမ်းမှလာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၁၅ စက္ကန့်ထက်ပိုမနှိပ်ရ၊ တစ်ပြိုင်တည်းစတင်ခြင်းနှင့်မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာကိုမနှိပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသူကမမြင်ရပါဘူး။ ထိုအရာသည် ၂၄ နာရီကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ Lousy ပစ္စည်း
ကောင်းပြီ၊ ငါ့အတွက်တော့ပြီးပြည့်စုံတယ် ငါဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဝယ်နှင့်အတူမည်သည့်ပြproblemနာမရှိဘဲဝယ်ယူခဲ့သည်။ နှင့် bq ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်စာမျက်နှာပြောင်းလဲမှုကိုတိုးတက်စေသော firmware အသစ်များရှိသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အစတွင်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခါတစ်ရံစာမျက်နှာ ၂ အစားစာမျက်နှာ ၂ ခုသုံးစွဲခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အသစ်က firmware ကိုပြissueနာနှင့်အတူ။
၎င်းကိုသော့ဖွင့်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ebook ဘက်ထရီကုန်သွားပြီးသူ့ဟာသူပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်
ငါ bq cervantes အလင်းကိုထိရှိသည်။ ဖိုင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် usb မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ် pc နှင့်ဆက်သွယ်သောအခါအစတွင်၎င်းသည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်း၊ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုသည်၎င်းကိုမှတ်မိခြင်းမရှိဟုဖော်ပြသည်။ ကျွန်တော့်မှာ Windows XP operating system ရှိတယ်။ ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲ
ကျွန်ုပ်၌ရှိသောစာအုပ်အချို့ကိုဖတ်ရန်ပြproblemsနာများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်၏စာရွက်စာတမ်းများတွင်သူတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့်အချို့စာမျက်နှာများသည်မပြည့်စုံသော bq တွင်၎င်းကိုထည့်သွင်းသောအခါ pdf ပုံစံဖြင့်ဖတ်ရှုခြင်း၌အခက်အခဲရှိသည်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဒီစာဖတ်သူကိုမျက်ခြည်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပေမယ့်သော့ခတ်ထားသည့်ပြissueနာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်ကိုပြန်လှည့်လိုက်သည်။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကိရိယာရှိခဲ့သည့်အဆက်မပြတ်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူဖြေရှင်းပြီးသားအရာတစ်ခုခုဖြစ်လျှင်၊ ထိုပြthemနာသည်၎င်းတို့တွင်မည်သို့ရှိနေကြောင်းသိလိုခဲ့သည်။ စက်ကပြန်လည်စတင်ရန်အချက်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်သည်။ ဘက်ထရီကုန်သွားမည်ကိုစောင့်နေရန်လိုသည်။
Oriol Alella ဟုသူကပြောသည်
ဒီစာဖတ်သူကိုဝယ်ဖို့ဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်မတိုက်တွန်းပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရပြီးဖိုရမ်များကို ၀ င်ရောက်သောအခါလူများနှင့်ပြbyနာများစွာရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိပါသည်။ ငါသိတယ်ငါနောက်ထပ်အမှတ်တံဆိပ်ရွေးချယ်။
Oriol Alella အားပြန်ကြားပါ
သင်ဘက်ထရီဖြည့်ပါကဖြုတ်လိုက်လျှင်၎င်းတွင်ဘက်ထရီမရှိပါက bq cervantes ebook သည်အားသွင်းမထားပါ။
Papyre 6.S အဲလက်စ်သည်တော်လှန်ရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်